Arooska boqortooyada UK ee London oo malaayiin qof ka soo qayb gashey (Sawiro) – SBC
Arooska boqortooyada UK ee London oo malaayiin qof ka soo qayb gashey (Sawiro)
Ilaa labo kun oo marti ah ayaa lagu casuumay ka soo qayb galka arooska ree boqor, waxay iskugu jiraan qoyska boqortooyada, qoyska reer Middleton, saaxiibada Kate iyo William, dad magac iyo sharaf ku leh dalkan Britain iyo dibadda, iyo weliba madax ka kala socota ilaa 50 dal.
Dad iyaguna lagu qiyaasay ilaa 600,000 oo ka tirsan dadweyaha caadiga ah ayaa iskood iskaga kala yimid dalka gudihiisa iyo dalalka kale ee reer Yurub iyo Maraykanka, si ay goob joog ugu noqdaan munaaasabaddani. Suxufiyiin lagu qiyaasay ilaa 10,000 oo ka kala tirsan saxaafadda kala duwan ee adduunka ayaa iyaguna ku soo qulqulayey maalmahan danbe magaalada London, una imanayey arooskan reer boqor. Waxaase la sadaalinayaa in dadweyne gaaray liaa 2 bilyan oo qof oo adduunka ka tirsani inay ka daawan doonaan arooskani television-nada iyo warbaahinta adduunka.
Munaasabaddan waa tii ugu weyneyd ee nooceeda ahayd 30-kii sano ee uu danbeeyey dalkan Britian, markii Prince William aabbihii iyo hooyadii, Prince Charles iyo Lady Diana ay is guursadeen sanaddii 1981. Waxana sanadkaasi telifishannada adduunka ka daawanayey ilaa 750 milyan.
Prince William iyo Kate Middleton waa ay isku doonanaayeen, waxayna isku barteen jaamicaddii ay ku wada jireen. Munaasabadda arooskooduna waxay si rasmi ah u bilaabmatey 8-d subaxnnimo ee Jimcaha saacadda London laakiin waxaa jirey dad badan oo goobta arooska tagey 4-tii subaxnimo.
Kate & William merehrkooda rasmiga ahi wuxuu ka dhacayaa kanisadda West minister Abby sacaaddu markii ay aheyd 11:00 Ka bacdina waxa loo gelbiyey qasriga boqortooyada ee Buckingham Palace, halkaasi oo lagu qabtey doono xafladda arooska.
Gelbiska waxa ka qaybgelay cutubyada fardoleyda iyo ciidamada salaan-sharafta ee boqortooyada, iyo diyaaradaha ciidamada cirka ee dalkan Ingiriiska. Ilaa 5000 o ka tirsan ciidamada bileyska iyo nabadgelyada ayaa heegan laga dhigay, 1000 ka mid ah ciidamadaasina waxay tuban yihiin labada dhinac ee jidka la sii mariyey lammaanaha arooska ah marka la gelbinayey, Waxa kale oo la adeegsaayaa ilaa 50 eey oo ah kuwa wax uriya.
Jidadka gaar ahaan degaannada West Minister iyo Buckingham Palace ayaa iyagana laga xidhay baabuurta iyo gaadiidka kale.
Television-nada iyo idaacadaha BBC da, kuwa la hadla adduunka iyo kuwa guduhuba waxay si toos ah u soo tebinayaan maalintan Jimcaha oo dhan munaasabadaha arooskan qoyska reer boqor. Waxa kale oo lagala socon karaa bogagga Website-yada Internet-ka idaacadaha aduunka.
ayagay utaalaa wasakhda maba aan jecjecli waxaas oo kale